မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသူများ အပါအ၀င် လူအုပ်စုတစ်စုက အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဓားများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းခုတ်သတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်၌ ပါဝင်ခဲ့သူ ခုနစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသူများ အပါအ၀င် လူအုပ်စုတစ်စုက အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဓားများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းခုတ်သတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်၌ ပါဝင်ခဲ့သူ ခုနစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ
မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသူများ အပါအ၀င် လူအုပ်စုတစ်စုက အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဓားများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းခုတ်သတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်၌ ပါဝင်ခဲ့သူ ခုနစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ
Posted by koyinmaung on Nov 28, 2011 in Copy/Paste | 27 comments
မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသူများ အပါအ၀င် လူအုပ်စုတစ်စုက အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဓားများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းခုတ်ထိုးသတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူခုနစ်ဦး အား ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ညပိုင်းက မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ နွယ်သာကီ ၆ လမ်း အနီးအနားတွင် အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ ကိုကျော်မင်းအား မျက်နှာဖုံးစွပ်သူများ အပါအ၀င် လူအုပ်စုတစ်စုက ၀ိုင်းဝန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကိုကျော်မင်းမှာ အဆိုပါနေ့ ည၌ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးနှင့်အတူ ဝေဘာဂီ ၆ လမ်းအတွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် စားသောက်နေစဉ် ကိုကျော်မင်းမှာ သန့်စင်ခန်းသို့သွားပြီး ပြန်အလာ၌ ဆိုင်အတွင်းသို့ မျက်နှာဖုံး စွပ်ထားသူများအပါအ၀င် လူအုပ်စု တစ်စုမှဓားများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းခုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိုကျော်မင်းက ဆိုင်အပြင်သို့ ရောက်အောင်ထွက်ခဲ့သော်လည်း အပြင်ဘက်၌ လည်း မျက်နှာဖုံးစွပ်များ အပါအ၀င် လူအုပ်စုတစ်စုက ၀ိုင်းဝန်း၍ဓားများဖြင့် ခုတ်ထိုးသတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများက တရားခံများအား ဖမ်းဆီးနိုင်ရန်အတွက် သက်သေများအား ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေကြောင်း၊ တရားခံဟုယူဆနိုင်သည့် ပုံသဏ္ဌာန်များကိုလည်း ခဲပန်းချီဆွဲ၍ ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းကို နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မျက်နှာဖုံး စွပ်ထားသူများအပါအ၀င် လူအုပ်စုတစ်စုက အသက်၃၀ အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဓားများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းခုတ်ထိုးသတ်ခဲ့ သည့်ဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သူ ခုနစ်ဦး အား ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဖြစ်သူ ဒုရဲမှူးဦးစိန်ရိုးက “ဒီနေ့အထိ တော့ တရားခံခုနစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိ ထားပြီးသွားပါပြီ။ ဆက်လက်ပြီး စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်သွားပါမယ်”ဟု နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကပြောကြား ခဲ့သည်။
၎င်းဖြစ်စဉ်ကို မြောက်ဥက္က လာပရဲစခန်းမှ (ပ)၅၂၄/၂၀၁၁၊ ပြစ် မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂/၁၁၄ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
လူစားလဲမထိုးရဘူး။ အဖမ်းပြပြီးလဲ မညှိရဘူး။
တကယ် မိတယ်ဆိုရင်နောက်လူတွေ မြန်ပါတယ်။
အဲဒါ Forum ထဲမှာ တင်ပြီးသားကြီးလေ…ဖတ်ပြီးသွားပြီ koyinmaung ရေ…အသေးစိတ်ကို အဲဒီ့ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ…
lone ရေ fofum ထဲမှာအသေးစိတ်ရေးထားတယ်ဆိုလို့
စောစောကပဲ eleven မှာ တွေ့လိုက်တယ်။
ဂျာနယ်တွေ ဖွလို့ လူတွေ သိတာ.. မဟုတ်ရင် သိမှာတောင် မဟုတ်ဘူး။
အမှု သာ အမှန်တိုင်း စီရင် မယ် ဆိုရင် အဲဒီ လူ ၃၀ ( တအုပ်စု လုံး ) ဘယ်လောက် ထောင် ကျနိုင် လဲ။
အဲဒီ လူ ၃၀ ( တအုပ်စု လုံး ) ….. လို့ တော့ မလုပ်နဲ့ လေ
စာကို သေချာ ပြန်ဖတ်လိုက်ဦး ။ ၇ ယောက်ပါ ။ အသတ်ခံရသူက အသက် ၃၀ ပါ ။
၀င်ပြောပြလို့ရွှေစိတ်တော် မကောက်နဲ့ ဦး ။
တကယ်လို့ များ ခင်ဗျားက နယ်က လူ ၊ ကျေးရွာ တခုခု မှာ နေတဲ့ လူဆိုရင်
ဂျပိုးက လိပ်ဖြစ်သွားပြီး အယောက် ၃၀ က ၀ိုင်းသတ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ကောလဟာလ ဖြစ်
ကျုပ်သာ အမတ် တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင်ပေါ့ ။
အဲဒီလို ကောင်တွေရယ် ၊ မုဒိမ်းကောင်တွေရယ် အတွက် သေဒဏ် ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေ
ကို တင်ပြဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ် ။ ဒီမှာက လူသတ်တဲ့ ကောင် ထောင်ကျလှ အလွန်ဆုံး
၁၀ နှစ်ပေါ့ ။ မပြည့်ခင် ပြန်လွတ်လာ ထပ်သတ်ပေါ့ ။ သေဒဏ်ဆို ဘယ်လိုနေလဲ ။
အဟမ်း …. ဦးဖွတ်ကျား
lateral thinking အရ ဆွေးနွေးမယ်နော…
အနှီ လူမိုက်၇ယောက်သည် …စားရမဲ့၍သော်လည်းကောင်း
ပညာမတတ်၍ ဆင်ခြင်တုံမဲ့၍သော်လည်းကောင်း မိသားစုအတွက်
ဘာကိုမှ မငဲ့နိုင်၍သော်လည်းကောင်း ကျူးလွန်ခဲ့ရတယ် ဆိုချင်ပါတယ်ဗျ…
ခြုံပြောရင် လူမိုက်ပေါ့ဗျာ …..မိုက်ချင်လွန်းလို့ မိုက်နေတဲ့လူတွေ ရှိမှာအမှန်ဖြစ်သလို
ခေတ် စနစ်အရ အခြားအရာတွေ မပြည့်စုံလွန်းလို့ …..ပစ္စည်းမဲ့မာနတွေ ထကြွလွန်းလို့
မိုက်ခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်း ရှိနေလေတော့ ………..
အခြေံလူတန်းစား သက်သာချောင်ချိရေး စားဝတ်နေရေးပြေလည်ရေးကို
ဖော်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်..အူမတောင့်မှ သီလစောင့်မယ် မဟုတ်ပါလား…….
သည်လိုဖော်ဆောင်ပြီးခါကျမှ အသစ်အသစ်ဖြစ်လတံ့သော မှုခင်းများမှာ…(မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့တော့
ဆုတောင်းပါ၏)ခေတ်စနစ် ကောင်းလျက်နဲ့ ကြိုးစားခွင့်ရှိလျက်နဲ့ ……အခြေအနေပေးလျက်နဲ့
ရေသာခိုလို့မိုက်တယ် ..မိုက်တွင်းနက်လို့ မိုက်တယ်…ဂလို စိတ်ဓါတ်သိမ်ဖျင်းသူတွေ ကျမှသာ
ခုဟာက တော့ အင်း …. အလုပ်ရှင်လား ..ငွေရှင်လား ….ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားလား…
လား…..လား….ပေါင်းများစွာမှာ …(ကိုရင်ပြောသလိုပဲ ၁၀နှစ် ဆိုရင်တောင် လုံလောက်ပါတယ်ဗျာ….
တကယ်က ) … သူတို့နောက်က မိဘ..မိသားစု …အစုံပေါ့ ……နောင် ၁၀နှစ်ကြာတဲ့အခါ
သူတို့တွေသည် ……လူကောင်းတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်… လောကီကို စိတ်ကုန်လို့ သင်္ကန်းစီးချင်စီးမယ်. ….
ပြန်မိုက်ချင်မိုက်မယ်ပေါ့. …(ပြန်မိုက်ရင် အထဲပြန်ထည့်ရမယ့် ဥပဒေတော့လိုတယ်. ..ခုကိစ္စလို
လက်လွတ်စပါယ် မျိုး ကျူးလွန်ခွင့်မရအောင်တော့ နိုင်ငံသားတိုင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အစိုးရတော့
အင်း ……..ဆက်ပြောရရင် ယောက်ျားချင်း …၀မ်းဘိုင်ဝမ်း မယှဉ်နိုင်လို့
ယောက်ျားစိတ်မရှိလို့ ….၆ဆံပဲရှိပြီး ၆စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျနေတဲ့ ..ဟို သိန်း ဘယ်လောက်ပေးပြီး
လူမိုက်ငှားတဲ့ကောင်ကိုတော့ ……ကိုရင်နဲ့ ကျုပ် စိတ်သဘောချင်းတူပါတယ်လေ..
သတ်တာတောင် ညှင်း သတ်ရမှာဗျ. ….ဒါမှနောက်လူ လိုက်မလုပ်ရဲမှာ…
ဒါနဲ့ငဇာဂီ က ဘာလို့ဖွတ်ကျား ဖြစ်သွားရသဒုံး
လူ ၃၀ လို့ အဖတ်ရှမ်း အရေးမှား မိတာ ကို တော့ ဂေဇက်ဝင် မိသားစု နဲ့ ပရိတ်သတ် အား လုံး အား အနူးအညွတ် တလေးတစား တောင်း ပန် ပါတယ်။
ပြောချင် တဲ့ ရည်ရွယ် ချက် နဲ့ ရေးတာ နဲ့ လွဲ တော့ လည်း နီကိုရဲ ( – ) ဖြစ်တော့ တာ ပေါ့။
ရင် ထဲ က စေတနာ အမှန် ကို ပြပါ ဆိုရင် အာလုံး ငြိမ်းချမ်း နေတာ ကို ပဲ သဘော ကျပါတယ်။
ခု သေတဲ့ သူ ဘက် က သေသူ ကို မှီခို နေရသူ မိသားစု အလွန် ဆုံး ၁၀ ယောက် ပေါ့၊ အတိဒုက္ခ ရောက် ကြ ရမယ်။
ဘာပြစ်ဒဏ် ပဲ ချ ချ ပါ ခု ပြစ် မှု ကျူး လွန် သူ ဘက် က ၇ ယောက် ကို မှီခို နေ ရ တဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ မိသားစု ဘယ်နှစ်ယောက် လောက် အတိဒုက္ခ ရောက် ကြမလဲ ဆိုတာ ကို တွေး ရင်း ရေးမိတာ ပါ။
ပြောရမယ် ဆိုရင် သေ သူ ရဲ့ မိသားစု က မှ ကူငွေ ရ အုံး မယ်။ ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူတို့ တတွေ ရဲ့ မိသားစု ကတော့ ဒေါသ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာ တွေ နဲ့ ရင် ဆိုင် ကြပေအုံး တော့ ပေါ့ လေ။
အဓိက တရားခံက တစ်ယောက်တည်းပါ …သိန်း 20 ပေးပြီး သတ်ခိုင်းတယ်လို. ကြားပါတယ်… အဲလူပဲ ကို အပြစ်ပိုပေးသင်.တယ်…
မီးဒုတ်မီးဒုတ်ရှို့ရှို့ လူသတ်သမားတွေ သတ်ပစ်
မီးဒုတ်မီးဒုတ်ရှို့ရှို့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဖြုတ်ဖြုတ်
ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုကြောင်ကြီး အစားအော်ပေးတာပါ။
ကူညီပါရစေ အဖွဲ့တွေက တစ်ကယ် အလုပ်လုပ်နေကြပြီလား…
တစ်နိုင်ငံလုံးသိအောင် တင်ပြပေးနိုင်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကို ကျေးဇူးတင်သည်…
တစ်နိုင်ငံလုံးသိသွားတာမို့ ကူညီပါရစေတွေက မကူညီချင်လို့မရတော့တာ ဖြစ်မယ်…
အထင်မသေးရဲသလို အထင်လဲ မကြီးဘူးဗျ….။
Gipsy ရေ ။
တရားခံတွေ မိတာ မြန်တာ အဲဒီ ရဲတွေ တော်တာထက်ကို မြန်မာနိုင်ငံက
လူတွေရဲ့စပ်စု တတ်တဲ့ စိတ် အာချောင် တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကြောင့်
အမှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်တာက ၉၉ ရာခိုင်နှုံးပါတယ် ဆိုတာ မမေ့နဲ့ ဦး ။
ဂျာနယ်တွေ အကျိုး ကျေးဇူးက ကြီးပါတယ် ။ တတ်ကြပါတယ်။
အတတ်ကျူးတော့ ဘီလူးဖြစ် ဆိုသလိုပဲ7Days ဂျာနယ်မှာ အဝေးပြေးကားမှောက်လို့ 
သေတဲ့ လူ အရေအတွက်က ဂျာနယ် တစ်စောင်ထဲရဲ့ဆောင်းပါး နှစ်ခုမှာ တခုက
၈ ယောက် ၊ နောက်တခုက ၉ ယောက် လို့ ရေးထား ။
တော်တော့ကို ၆၃ အောင်တဲ့ ဂျာနယ်တိုက်က အကောင်တွေပဲ ။
(၆၃ အောင် = ၆၃ မကျ )
ဒါကြောင့် အဘက မီဒီယာ ကို မီဒီးယာ နဲ့တိုက်မယ်
၁၀နှစ်အတွင်းမှာ အဘတို့ရဲ့ နိုင်ဂံဒေါ်ဂျီးဟာ
၆ကိုရီးယားကို ၆၇မ်း ကျော်တက်သွားမှာကွယ့်
ဦးဖွတ်ကျား ရေကျွန်တော်ကသိပ်မသိပေမဲ. နိုင့်ငံအတွက်အကူညီသာလိုရင်အမြဲအဆင်သင်.ပါ ၁၀စုနှစ်အတွင်း ၆ ကိုရီးယားကိုကျော်မယ်ဆိုတာတော.စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ သူတို.ထက်လဲယဉ်ကျေးမှုအသားပေး ကားလေးတွေ တင်ပြချင်တယ်ခင်ဗျ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလေးတွေဝင်တင်ပြသွားတာပါ (အမှားပါရင်ခွင်.လွတ်ကျနော်)
မှန်ပါတယ် ကိုတပ်မ … အာချောင်တဲ့ပြည်သူတွေ ကို အခြေခံပြီး ဟိုမေး ဒီမေးလုပ်
ပြီးရင် နာမည်ခံ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေရ ဒါပဲလေ…
ဂျာနယ်တွေကလဲ အမြန်နှုန်း နဲ့ ပန်းကန် လုံးစီး ပြီးရင်ပြီးရော လုပ်နေကြတာ…
သတင်းတစ်ခုတက်လာရင် ကိုရင် တပ်မ ပြောသလို မယုံဘူးဟေ့…မယုံဘူး….
လုပ်တဲ.သူမိတာနဲ.တော. ဘာမှအထင်မကြီးသေးဘူးဗျာ ခိုင်းစေသူကအဓိကလေ သူကိုမိရင်တော.လေးစားတယ်ဗျာ နောက်ခံလူကဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေ ဖမ်းရဲတယ် ဆိုရင်ပေါ့ မတရားခံရပြီး ငွေနဲ.ပစ်ပေါက်တာတွေ ပြည်သူတွေခံစားရပေါင်းမနည်းတော့ဘူးလေ အဲ.လိုကောင်စားမျိုးတွေများများဖမ်းမိသင့်ပါတယ်
ဒါနဲ့ သူတို့ ပိုက်ဆံ သိန်း ၂၀ ဆိုပြီး ဒီမှာ ရေးထားတယ် တနေရာမှာ ကြားတော့ ၂၅ ဆိုလား.. ထားပါတော့ အဲလောက် ပိုက်ဆံ ပေးပြီး ခိုင်းရအောင်လည်း ဘာရန်ညိုးများ ရှိမလဲ ဇစ်မြစ်လေးတော့ သိချင်သား.. စပ်စုရန်ကော ဆိုပါတော့..
အဟမ်းအဟမ်းအဟမ်း (သြော် ဒီချောင်းနဲ့ကတော့ ခက်ပြီ)
မနှစ်က တန်ဆောင်တိုင်မှာ စခဲ့တဲ့ ရန်ညှိုးပါတဲ့။
အခုသေတဲ့ လူရဲ့ညီက မနှစ်က ကားတစ်စီးကို တက်မောင်းတယ်ဆိုလား။
အဲဒါ လူအုပ်ထဲကို ၀င်သွားတယ် ဆိုလား။ လူသေတယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီမှာ အခုအသတ်ခံရတဲ့ လူရဲ့ ညီကတဲ့ ထောင်ကျသွားတယ်ဆိုလား။
အဲဒီရန်ညိုးလို့ အဲဒီရပ်ကွက်ထဲနေတဲ့ တက်စီမောင်းသူတစ်ယောက်က
မသေမချာ သတင်းထုတ်ပြန်သွားပါတယ်ဗျာ။ ဟုတ်မဟုတ် ကတော့ စောင့်ကြည့်ဗျို့။
ပိုက်ဆံ နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းကို လူဘယ်နှစ်ယောက်ခွဲယူရမှာလဲ … ။ တစ်ယောက်စီရတဲ့ ပိုက်ဆံ အတော်နည်းမှာပါပဲ … ။ တစ်ယောက် နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းရတယ်ဆိုလျှင်တောင် တဘ၀လုံးနဲ့ ရင်းပြီး မလုပ်သင့်တဲ့ ဒုစရိုက်လုပ်ရပ်ပါပဲ … ။
လူတစ်ယောက်သတ်တာများ ယောင်္ကျား ၇ ယောက်တောင်လိုလို.လား…
တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ.. ဘယ်လိုအညှိုးအတေးတွေလဲမှမသိတာ.
lone ကလည်း ဘာမှန်းမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ ထပ်မန့်တာပါဗျာ။
မနှစ်က တန်ဆောင်တိုင်တုန်းက အခုအသတ်ခံရတဲ့လူ နဲ့
ဟိုဘက်က သတ်ခိုင်းတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ လူတို့ ရန်ကြွေးရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တရားဝင်သတင်းမဟုတ်လို့ ရွှတ်နေုာက်နောက် လျှောက်ရေးတာပါ။
ကုသိုလ်ပွဲကနေ အကုသိုလ် တွေဆက်လာတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။
ဒါတွေက မသေချာသေးတော့ ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါဗျာ။